Ciidamada maamulka KMG ah ee Jubba oo la wareegay Jaziirada Kudhaa ee Jubbada Hoose (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2013 4:37 b 0
Kismaayo, November 10, 2013 – Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta Jaziirada Kudhaa ee gobolka Jubbada hoose, ma jiro wax dagaal ah oo deegaanka ka dhacay.
Afhayeenka maamulka KMG ah ee Jubba Cabdinaasir seeraar oo la hadlay idaacada daljir, ayaa sheegay in ay ciidankoodu la wareegeen Kudhaa, isagoo xusay in ay Al-shabaab isaga bexeen isla markaasna uusan wax dagaal ah ka dhicin deegaanka.
Al-shabaab ayaa horay gacanta ugu hayey Kudhaa iyo deegaano kale oo ku dhow, ururku weli kama aysan hadlin warka soo baxay Jubba.
Docda kale Afhayeenka maamulka KMG ah ee Jubba Cabdinaasir Seeraar, waxaa uu sheegay in guddi loo saaray soo celinta ciidamadii horay looga saaray Kismaayo ee ahaa dhinacyadii ka soo horjeeday maamulka Jubba.
?Guddi ayaa howsha galay, waa la soo celinayaa waxayna ku biirayaan ciidamada maamulka Jubba ee KMG ah.? Ayuu yiri Afhayeenka maamulka oo la hadlay idaacada Daljir.
Qoddobadii la isku raacay dhowaan ayey qayb ka ahaayeen soo celinta ciidamada banaanka ka ah Jubba ee jooga gobolka, bartamihii sanadka waxaa Kismaayo ku dagaalamay dhinacyo dhowr ah oo ay ku jireen maamulka Jubba iyo hugaamiyaal banaanka jooga.
Dhegeyso: Afhayeen Cabdinaasir Seeraar oo u waramay Maxamuud Cabdi oo daljir ka tirsan